Thursday January 03, 2019 - 12:18:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Afhayeenka ciidamada Xarakada Al-Shabaab oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkii duqeynta ahaa ee ay ku qaadeen Xerada Xalane iyo dhacdooyin kale.
Taliska ciidamada Amisom ayaa qariyay khasaaraha ka dhashay weerarkan, balse Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Heysom, ayaa daaha ka qaaday in madaafiicdu kusoo hoobatay xerada khasaaraha ay kala kulmeen, inkastoo uu ku gaabsaday iney 3 uga dhaawacantay.
Sidoo kale wuxuu faahfaahiyay weerar laba gaari looga gubay ciidamada Kenya oo ka dhacay inta u dhaxaysa Dhoobley iyo Afmadoow oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose, wuxuu sheegay in mid kamid ah gaadiidkan uu gabi ahaanba burburay kadib markii qarax culus lala helay, halka gaariga labaad ay wax yeelo ku gaartay kamiin iska hor imaad isku badalay oo dhex maray Mujaahidiinta iyo Kenyaatiga.
Ugu dambeyntii Sheekh Abuu Muscab ayaa bogaadiyay ciidamada Al Shabaab gaar ahaanna raggii fuliyay weerarkii duqeynta ahaa ee Xalane. Dhanka kale wuxuu farriin u diray ciidamada DF iyo kuwa maamul goboleedyada oo uu kula taliyay iney kasoo baxaan safka shisheeyaha.